कोरोना अनुभव : आइसोलेसनमा पुगेको दिन बाँच्छुजस्तो लागेको थिएन
३३५० मिटर अग्लो देम्बाडाँडामा भलिबल प्रतियोगिता सुरु
चट्याङ लागेर खिजीदेम्बामा एक महिलाको मृत्यु
खिजीदेम्बाले थाल्यो युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने अभियान, सबै वडामा घरेलु सीप विकास तालिम
मनोज बुढाथोकीद्वारा विद्यालयलाई शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण
कोरोना जितेँ, समाजसँग हारेँ
नवराज कार्की शनिवार, आश्विन १०, २०७७
कोरोना भाइरसबारे बजारमा दुईथरि हल्ला छन् । एउटा हल्ला; यो रुघामर्की हो, सामान्य फ्लु हो; बेसारपानीले पचाइदिन सकिन्छ । आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन । अर्को हल्ला छ- यो सामान्य रोग हुँदै होइन । सचेत बन्नु जरुरी छ ।
यी दुवै हल्लामा कत्तिको सत्यता छ त्यतातिर नजाउँ । बरु आफैँले कोरोना संक्रमित हुँदा भोगेका अनुभव यहाँहरूलाई बताउँ ।
सपनाले बतायो कोरोना भाइरसको संक्रमण !
भदौ २१ गतेको कुरा हो । साँझपख निकै तीर्खा लागिरहेको थियो । एकजना पत्रकार साथीले आफैँले फलाएर ल्याइदिएको एउटा खिरिलो काँक्रो चिरिप्पै पारेँ । तीर्खा नमेटिएकाले एउटा माउन्टेन ड्यु ल्याएर सिध्याएँ । त्यतिले पनि तलतल मेटिएन । ब्रोइलर कुखुराको मासु पनि खाइयो । खाना रुचेकै थियो ।
सुतिसकेपछि निद्रामै मैले हनहनी ज्वरो आएको थाहा पाइरहेको थिएँ । ज्वरो कसरी आयो म निद्रामै बेलाबेला सोचिरहेको थिएँ । यसै क्रममा मलाई केही वस्तुले सपनामै थिचेजस्तै भयो । 'कोरोना लागेछ' कसैले निद्रामा भनेपछि म आत्तिँदै ब्युँझिएँ । ब्युँझिँदा ज्वरो हनहनी आइरहेको थियो । घरि ज्वरो घटेर पसिना खलखली आइरहेको थियो । आत्मबल पूरै घटेजस्तो लागिरहेको थियो । मसँग थर्मोमिटर थिएन । त्यसैले ज्वरो नाप्ने कुरै भएन ।
त्यस्तै रातको १ बजेको हुँदो हो । तीर्खा अत्यधिक लाग्यो । उठेर फिल्टरको पानी सबै सिध्याइदिउँ जस्तो लाग्यो । उठ्ने ताकत थिएन ममा । सुतिरहेँ विहानसम्म । विहान अलि ज्वरो घटेजस्तो महशुस भइरहेको थियो । त्यसैबेला एकजना साथीले एउटा सरकारी कार्यालयको प्रमाणपत्र डिजाइन तुरुन्तै गरिदिनुपर्यो भनेर मेल पठाए । म फुर्सदको समयमा ग्राफिक डिजाइन पनि गर्ने भएकाले बेलाबखत काम आइरहन्छ । २ घण्टाजति त्यसमा घोत्लिएँ । काम सकेर मेल गरिदिएँ । त्यतिबेलासम्म ज्वरो फेरि हनहनी बढेजस्तो महशुस भइरहेको थियो । घरि खलखली पसिना आइरहेको थियो । कञ्चट फुट्नेगरी टाउको दुखिरहेको थियो । आँखा रातो भएको थियो ।
मलाई धेरैपटक यसअघि पनि ज्वरो आएको थियो । के हुँदा कसरी ज्वरो आउँछ र लक्षण के के देखिन्छ भन्ने कुरा अनुभव थियो । तर यसपटकको ज्वरो विल्कुल भिन्न थियो । छातिभन्दा माथि मात्रै हनहनी ज्वरो थियो । तलतिर म तन्दुरुस्त छु भन्ने भान हुन्थ्यो । अरुबेला ज्वरो आउँदा जिउ फतक्क गल्ने गर्यो, तर यो पटक त विल्कुल फरक थियो ज्वरो । केही घण्टापछि हल्का हातगोडाका मांशपेशी कटकटी खान थाल्यो । सुख्खा खोकी सुरु भयो । घाटी खसखस भइरह्यो ।
यसअघि मैले लिखु गाउँपालिकाकी उपप्रमुख शान्ता ढुंगेलले कोरोना जितेको समाचार ओखलढुंगाखबरडटकममा सम्प्रेषण गरेको थिएँ । उनले मलाई बताएका लक्षण मलाई हुबहु मिलिरहेको थियो । अनि म निष्कर्षमा पुगेँ- मलाई कोरोना भाइरस लागेको छ । मैले साथीहरूलाई पनि मेसेन्जरमा च्याट गरेँ । मलाई देखिएको लक्षण शतप्रतिशत् कोरोना भाइरसको हो । म कोठाबाहिर निस्कन्नँ । तपाईँहरूले मलाई मलाई नभेट्नू । आखिर सपनाले पनि मलाई त्यही बताएको थियो ।
पेट बाँउडिने गरी भोक लाग्यो
ज्वरो सुरु भएदेखि नै मलाई खाना रूचिरहेको थियो । जे खायो भोकै मात्र लाग्ने लक्षण देखिन थाल्यो । भर्खर खाना खाएर हात चुठ्यो फेरि भोक लागिरहेको हुन्छ । म छक्क परिरहेको थिएँ । फलफूल खान्छु खाउन्जेल भोक हराउँछ, खान छाड्यो भोकले पेट बाँउडिने गरी समात्छ । फनफनी घुमाइरहेको महशुस हुन्छ । भदौ २५ गते म पीसीआर परीक्षणका लागि थ्रोट स्वाब दिन ओखलढुंगा क्याम्पसको भवनमा पुगेको थिएँ । त्यतिबेला त झन् ढुंगामाटो सबै खाउँजस्तो भोक लागिरहेको थियो ।
ल्याब परीक्षण नर्मल थियो
ज्वरो हनहनी आएको दोस्रो दिन अर्थात भदौ २३ गते मैले ल्याब परीक्षण पनि गरेँ । कतै टाइफाइड त होइन म शंका मानिरहेको पनि थिएँ । ल्याब परीक्षणमा रगतको मात्रा सन्तुलन थियो अर्थात् नर्मल देखियो । यत्रो हनहनी ज्वरो आउँदा केही न केही त घटबढ हुनुपर्ने हो, म शंका मानिरहेको थिएँ । डाक्टरको सिफारिस अनुसार स्थानीय मेडिकलबाट टाइफाइडको औषधि ल्याएर पनि खाएँ ।
सीडीओलाई भनेँ- मलाई देखिएको लक्षण कोरोनाकै हो, क्वारेन्टाइन हालिदिनुस्
भदौ २४ गते ओखलढुंगा कांग्रेस पार्टी सभापति प्रदीपकुमार सुनुवार, जिल्ला समन्वय प्रमुख जयबहादुर श्रेष्ठसहित ९ जनालाई संक्रमण पुष्टि भयो । त्यसमध्येका दीर्गबहादुर खत्रीलाई पनि संक्रमण पुष्टि भएको थियो । भदौ १९ गते शुक्रबार दिउँसो उनीसँग भेट भएको थियो । त्यति भएपछि त के चाहियो र मलाई कोरोना पुष्टि भएजत्तिकै भयो ।
अब मेरो मनमा एउटै सोच आयो- क्वारेन्टाइन गएर बस्छु । त्यस दिन दिउँसो ओखलढुंगाका सीडीओ कृष्ण पौडेललाई फोन गरेँ । व्यस्त रहेको जनाए । बेलुकीपख फेरि कुरा भयो । 'म त शतप्रतिशत् संक्रमित जस्तै भइहालेँ, अब म बस्ने क्षेत्रलाई जोगाउनुपर्छ भोलि स्वाब लिएपछि क्वारेन्टाइन हालिदिनुपर्यो ।'
उनले मेरो कुरा सुनेपछि त्यसो हो भने तपाईँलाई पठाउँला भनेर भने । भोलिपल्ट स्वाब दिएपछि म ओखलढुंगा सदरमुकामबाट बाइक चढेर रुम्जाटारको क्वारेन्टाइनमा गएर बसेँ ।
भदौ २८ गते साँझ क्वारेन्टाइनमै रहँदा कोरोना पुष्टि भयो । जसमा मसहित ओखलढुंगाका १८ जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको थियो । त्यतिञ्जेलसम्म मलाई लक्षणहरु ठीक भएकै थिएनन् । ज्वरो उस्तै थियो । भोलिपल्ट खाना खाइसकेपछि मलाई रुम्जाटार अस्पतालको आइसोलेसनमा बोलाइयो । म हुर्रिँदै हुर्रिँदै बाइकबाटै आइसोलेसन पुगेँ । आइसोलेसन डिसइन्फेक्सन हुँदै थियो । मलाई २ घण्टाजति गेटमा पर्खन लगाइयो । ज्वरोले सिकिस्तै भएकाले होला म धेरै कमजोर भइसकेको थिएँ ।
रुम प्रवेश गर्नुपूर्व एकजना डाक्टरले मेरो अवस्था बुझे । पछि उनले मास्क खोल्दै केही हुँदैन भनेर सम्झाए । सिकिस्त भएको कोरोनाको विरामीको छउम मास्क खोल्नु आफैँमा जोखिम थियो । तर उनले मलाई कोरोना केही होइन भनेर शान्त्वना दिनका लागि त्यसो गरेका हुनसक्छन् ।
३ बजेतिर पत्रकार साथीहरू लिलाबहादुर सुनुवार र देवकुमार दाहाल आइसोलेसनमा मलाई भेट्न आएका थिए । आइसोलेसनको ओढ्ने साह्रै पातलो थियो । मलाई यस्तो कपडाले झन् चीसो लाग्ने भयो, सिरक ल्याइदेओ भनेँ । उनीहरुले खोजेर ल्याइदिए । त्यो सिरक नभएको भए म थप सिकिस्त हुने निश्चित थियो ।
फोन बजेको बज्यै
भदौ २८ मा मलाई संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख सुमन तिवारीले जानकारी दिए । त्यसपछि खबर चारैतिर फैलियो । मेरो फोन बजेको बज्यै हुन थाल्यो । कोरोनाले थलिएको मान्छेले सबै फोन उठाउन सम्भव थिएन । म ज्यादै कमजोर भइसकेको थिएँ । मैले फोन थाम्न नसकेपछि स्वीच अफ गरिदिएँ । केही घण्टापछि खोलेँ ।
फोन आइसोलेसनमा रहँदा पनि अत्यधिक आइरह्यो । सबैले स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नुभयो । केही फोनहरु मैले चाहेर पनि उठाउन सकिरहेको थिइनँ । मेरो स्वास्थ्य अवस्था प्रतिकूल थियो ।
समाचार लेख्न छाडिनँ
ओखलढुंगाखबरडटकम ओखलढुंगाको कोरोना गतिविधि नियमित अपडेट गर्ने अनलाइन थियो । यसले जिल्लाबाट सञ्चालन गरेर पनि जिल्लाकै समाचार दैनिक रुपमा अपडेट गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ । त्यसैले पनि अनलाइनमा केही न केही समाचार लेख्नैपर्थ्यो । म आफैँ यस अनलाइनको सञ्चालक/सम्पादक भए पनि कोरोना कहरका कारण कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको थिइनँ । त्यसैले अनलाइन केही साथीभाइको सहयोगमा एक्लैले चलाइरहेको थिएँ । म कोरोना संक्रमित भएर जतिसुकै विरामी भए पनि समाचार लेख्न छाडिनँ ।
मैले आइसोलेसनमै ल्यापटप लगेको थिएँ । कोरोनाले ग्रस्त बनाएका कारण किबोर्डमा औँलाहरु राम्ररी दगुर्दैन थिएँ । औँला चलाउनै समस्या भइरहेको थियो । ल्यापटपको स्क्रिन धमिलो देखिन्थ्यो । नियमित समाचार लेख्दा कोरोना जित्न थप उर्जा प्राप्त भयो ।
कोरोना पुष्टि भएपछि साँझमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसी भट्टराईले फोन गरेर अब केही समय तपाइँका समाचार अनलाइनमा हेर्न नपाइने भइयो भनेर भने । तर म समाचार लेख्न छाड्दिनँ भनेर उनलाई भनेको थिएँ । आइसोलेसनमा रहँदा पनि धेरैले ओखलढुंगाखबरमा फलानो समाचार त देखिएन भनेर चासो व्यक्त गर्ने गरेका थिए ।
जतिबेला बाँच्छुजस्तो लागेको थिएन
आइसोलेसनमा पुगेको पहिलो दिन तातोपानी तताएर खान खोजेँ । तर मुखमा पुर्‍याउनै मुश्किल भयो । हात थर्थरी कापेको थियो । जसोतसो ओछ्यानमा गिलास राखेर मुख गाडेर तातोपानी पिएँ ।
कमजोरी निकै महशुस भइरहेको थियो । ८ दिनदेखि ज्वरो आइरहेको थियो । खोकी उस्तै थियो । साथीहरुले ल्याइदिएको सिरकमा तातो गरेर सुतेँ । सुतेको केही बेरमा मलाई सास फेर्न समस्या भएजस्तो लाग्यो । हातगोडा आफैँ जुरुक जुरुक उफ्रिन्थ्यो । आत्मबल निकै कमजोर भएको महशुस भइरहेको थियो । हतार हतार अक्सिमिटर औँलामा जोडेर हेरेँ । अक्सिजनको मात्रा नर्मल थियो ।
तर पनि मुटु छेउबाट केही चिजले यसरी थिच्यो, अब बाँच्दिनँ जस्तो लाग्यो । भएभरका कोरोनाका सुई ममाथि नै परीक्षण गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो । आधाघण्टापछि त्यो समस्या कम भयो ।
सुख्खा खोकी र खसखस
मलाई खोकी लागेपछि धेरै नै सताउने गर्छ । २०७२ सालमा सुख्खा खोकीकै कारण ओखलढुंगामा गरिएको उपचार सम्भव नभएर काठमाडौँमा गएर उपचार गरेर फर्किएको थिएँ । त्यतिबेला धुलो औषधि २ महिनासम्म फोक्सोमा पठाएपछि खोकी निको भएको थियो । यसपालि पनि कोरोना लागेका बेला त्यस्तै सुख्खा खोकी लाग्यो । त्यसमाथि ३/४ दिन रगत पनि देखियो । घाटीमा खसखस उस्तै थियो । जति औषधि खाए पनि ठीक भएन ।
कहिलेकाहीँ त घाँटीबाट हात छिराएर फोक्सो निकालेर निचोरिदिउँ जस्तो लाग्थ्यो । तर त्यसो पनि कहाँ गर्न मिल्यो र ? आयुर्वेदिक औषधिका बट्टै रित्याए पनि खोकी निको भएन । मह, अदुवा, लसुन, तुलसीपत्ता, गुर्जो, कागती, बेसारलगायतका चिजहरु त कति खाइयो-खाइयो ।
पानीको बाफ ज्वरो आएको दिनदेखि नै लिएको हुँ । पानीको बाफ सुरुदेखि नै लिएकै कारण मलाई स्वासप्रस्वासमा थप समस्या नभएको होला जस्तो लाग्छ ।
गीत सुन्दा झन् समस्या !
लक्षणसहितको कोरोना देखिएका बेला यसै मन कोमल हुँदो रहेछ । मेरो मोबाइलमा भएका गीतहरु प्राय: मिलन विछोडका थिए । ती गीतहरु सुन्दा झन् समस्या बढेजस्तो महशुस गरे । किनकि त्यहाँ विछोडका शब्दहरूले मन छियाछिया हुँदोरहेछ । त्यसले समस्या थप्दो रहेछ ।
मैले कोठाबाटै डा. योगी विकासानन्द र डा. ताराजीका प्रेरणादायी उत्प्रेरक भिडियोहरू युट्युबबाट डाउनलोड गरेर लगेको थिएँ । ती भिडियोहरूले भने समस्या भएका बेला आनन्दित बनाएको थियो । मैले कमजोर महशुस हुँदा रगत उमाल्ने देशभक्ति गीतहरू सुनेँ । तिनले मेरो शरीरमा उर्जा मिल्थ्यो ।
जिल्ला अस्पताल रुम्जाटारका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट सन्तोष देवले भजनहरू पनि सुन्न सुझाएका थिए । तर भजन सुन्न बिर्सिएँछु ।
कोरोनाले अत्यधिक भोक लागेका कारण मेरो खुवाई डरलाग्दो थियो । आइसोलेसनमा विहान एउटा अण्डा र चिया, खाना, दिउँसो गेडागुडी, स्न्याक्स आइटम र बेलुकी खाना र एउटा अण्डा आउँथ्यो । ती सबै खानेकुरा खाइसक्नु त सामान्य नै थियो । पल्लो कोठामा रहेका महलकृष्ण श्रेष्ठ, योगेश्वर राजभण्डारी र निबन्दना राजभण्डारीले मलाई खानेकुरा नियमित दिनुहुन्थ्यो । म ती झोलिला र पोषिला खानेकुरा एकएक गर्दै रित्याइदिन्थेँ । साँच्चै भन्ने हो भने उहाँहरूले नै हो मलाई बचाएको ।
म सिकिस्त बिरामी हुँदा पनि ख्याल गरेर झोलिलो खानेकुरा ल्याइदिनुहुन्थ्यो । म अघाएर खानै नसक्ने अवस्थामा पनि महलकृष्ण दाजुले जवर्जस्ती खानेकुरा राखिदिनुहुन्थ्यो । मैले खाएको हेर्न उहाँलाई मजा लाग्थ्यो रे !
ऐना हेर्दा अनुहारमा मुस्कान देखेपछि रोएँ
शरीरमा ज्वरो घट्नु भनेको आधा रोग घट्नु जत्तिकै भएको थियो । अघिल्लो दिन अलि बढी विरामी भएको मलाई भदौ ३० गते भने केही कम भएको थियो । बेलुकीपख बाथरुमको ऐनामा हेर्दा अलिकति अनुहारमा मुस्कान देखेँ । आँसु आयो । रोएँ । कोरोनाले मन पनि कोमल बनाउँदो रहेछ । ओछ्यानमा आएर पनि रोएँ । मेरो मन यति भावुक बनेको थियो कि; हामीलाई कोरोनाको डरत्रास नमानी खाना खाजा खुवाउने दिदीहरूको महानता सम्झेर पनि रोइरहेको थिएँ ।
जब पैसा चलेन !
कोरोना लागे पनि आइसोलेसनमा रहँदा केही पैसा साथमा थियो । तर त्यसले काम गरेन । गरोस् पनि कसरी ? कोरोना संक्रमितको पैसा कसले लिइदेओस् ? तर यस्तो बेला साथसम्बन्ध चाहिँदो रहेछ । कोरोना लागेको बेला धेरैले पोषिला खानेकुरा ल्याएर दिनुभयो । स्वास्थ्यप्रतिको चिन्ता गर्नुभयो ।
१५ दिन लामो क्वारेन्टाइन/आइसोलेसन बसाइँपछि म कोरोना जित्न सफल भएँ । असोज ८ गते संक्रमणमुक्त भएपछि म मोलुङ गाउँपालिका १ स्थित घरमा होम क्वारेन्टाइनमा छु । कोरोना जितेकोमा खुसी त अवश्य लागेको छ नै, तर समाजसँग भने म हारेँ । ओखलढुंगामा भर्खर मात्रै अलि बढी संख्यामा कोरोना देखिएको हो । त्यसैले कोरोना संक्रिमतलाई गर्ने व्यवहार बदलिएको छैन ।
केही साथीहरूले मसँग जोडेर फलानो यो पसलमा चिया खान्थ्यो, फलानोसँग साँठगाँठ थियो त्यसलाई कोरोना छ भनेर हिँडिरहेका छन् भन्ने सुन्छु । मनमनै हाँस्छु । किनकि म यो समाजले गर्ने व्यवहार पहिले नै अनुमान गरिसकेको थिएँ । जे अनुमान गरेको थिएँ त्यही अहिले भइरहेको छ ।
तर तिनीहरुले आफू संक्रमित भएको एकचोटि कल्पना गर्न जरुरी छ । आफू संक्रमित हुँदा के हुँदो रहेछ अनिमात्रै बुझ्छन् । भलै केही छैन । नेपालमा कोरोनाको संक्रमणको दर हेर्दा एकचोटि ती साथीहरूको पनि पालो आउने निश्चित छ । त्यतिबेला हामी कोरोना पूर्व संक्रमितहरूले त 'गेट वेल सुन' भनौँला । तर तिनै साथीले तयार गरेको समाजले जसरी हामीलाई व्यवहार गरेको थियो, त्यही व्यवहार उनीहरुलाई पनि नगर्ला भन्न सकिन्न ।
मेरो विचारमा लक्षण नदेखिएका कोरोना संक्रमितहरुका लागि कोरोना केही नभए पनि/सामान्य भए पनि लक्षण देखिएका संक्रमितहरूका लागि कोरोना भाइरस खतरनाक रोग हो । त्यसैले यो रोगलाई रुघामर्की र सामान्य फ्लुसँग जोड्न मिल्दैन । यो रोग सामान्य थियो भने विश्व नै यसरी भयावह हुने अवस्था आउने थिएन । हामी यसरी लकडाउनमा थुनिएर बस्नुपर्ने अवस्था हुने थिएन ।
त्यसैले कोरोनालाई सामान्य नसोचौँ, स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सुरक्षित बनौँ । कोरोना संक्रमितहरूलाई हेय होइन, सहयोग गरौँ ।
(पत्रकार कार्की ओखलढुंगाखबरडटकमका सञ्चालक/सम्पादक हुन् ।)
प्रकाशित मिति: शनिवार, आश्विन १०, २०७७, ०४:१०:३३
कोरोना अनुभव : आइसोलेसनमा १ महिना बिताउँदा मैले जे भोगेँ
कस्ता ब्यक्तिले गर्न सक्छन् बलत्कार ? बलत्कारका घटना हुनुको मनोबैज्ञानिक कारणहरु यस्ता छन्
ओखलढुंगाखबरबाट डिलिट गरिएको त्यो समाचार, स्वास्थ्य कार्यालय चिप्लिँदा यसरी बन्यो हल्लाको समाचार*
कोरोना भाइरस भन्दा हजारौँ गुणा घातक सामाजिक भाइरस
३३५० मिटर अग्लो देम्बाडाँडामा भलिबल प्रतियोगिता सुरु आइतवार, चैत्र २९, २०७७
चट्याङ लागेर खिजीदेम्बामा एक महिलाको मृत्यु बुधवार, चैत्र १८, २०७७
खिजीदेम्बाले थाल्यो युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने अभियान, सबै वडामा घरेलु सीप विकास तालिम सोमवार, चैत्र ९, २०७७
मनोज बुढाथोकीद्वारा विद्यालयलाई शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण आइतवार, चैत्र ८, २०७७